Faras Loo Aqoon Saday Midka Adduunka Ugu Quruxda Badan (Sawirro) – Radio Daljir
Faras Loo Aqoon Saday Midka Adduunka Ugu Quruxda Badan (Sawirro)
Seteembar 7, 2017 8:13 b 1
Gamaanku wuxuu had iyo jeer ahaa qeyb kamid ah nolosha insaanka – u eegis la’aan waqtiga iyo casriga lagu jiro. Wuxuu lahaa qeyb weyn oo noloshu la’aantiis aysan suura-gal noqoteen. Hayeeshe qarniyadii danbe oo adeegsiga gaadiidka afar-lugoodka uu soo kordhay, ku tiirsanaanta Gamaanka aad bay hoos ugu dhacday.
Balse taasi kama horjoogsan in geesta kale looga faa’iideysto. Meelo badan oo dunida kamid ah wuxuu wali ku jiraa kaalinta xaragada iyo quruxda, waxaana loo leyliyaa in lagu damaashaadiyo caruusyada iyo dalxiisayaasha. Waxaa intaas dheer inuu wali qeyb weyn kaga jiro xulashada ina Aadan uu kaga doorbido yeelashada baabuur iyo wixii lamid ah.
Waana sababta keensaneysa in goobo iyo mudnaan gooni ah uu Gamaanka kale kaga xigsado Insaanka. Lamid ma ahan dameerka iyo baqasha oo aan inta badan helin daryeelka iyo gaasa-bixin dheeri ku ah dhaqashadooda.
Sidan oo kale ma u qurxinaa fardaheenna?
Ciidamada Dowladda oo Toogtey Haweeney iyo Nin Katirsanaa Kooxda Alshabaab
Abdirshid Hussein 4 years ago
Runtii aniga ilama qorxoone Faraskaas, waxa uu leeyahay guud iyo bulush dhaadheer un